Rene Ramos, Sergio Ramos walaalkiis ahna wakiilkiisa ayaa Real Madrid dhexda kaga garaacay khilaaf ka dhashay qandaraaska Ramos.
Miyuu xirmi doonaa xilli ciyaareedka Premier League?
Sergio Ramos, oo 34 jir ah, kaliya lix bilood ayaa uga harsan qandaraaskiisa Real Madrid, waxaana uu xor u ahaa inuu wadahadal la bilaabo koox kasta bisha Janaayo la’aanta Los Blancos. aan is celin karin.
Laakiin daafaca reer Spain ayaa weli rajo ka qaba rajada kooxdiisa ee ah inay heshiis cusub ka gaaraan Estadio Santiago Bernabeu.
Sikastaba, wakiilka Sergio Ramos, Rene Ramos, oo sidoo kale walaalo ah, ayaa ku eedeeyay Real Madrid inaysan heshiis gaarin: “Qof waa inuu sharaxaa sida iyo sababta aan u soo gaarnay heerkaan. Inaad u ogolaato kabtankaaga, kaasoo ka mid ah halyeeyada Real Madrid. , waxaad umuuqataa laacib kubiiri kara kooxaha kale isla markaana si bilaash ah ugu biiri kara koox kale hada. ‘
Khudbad uu siiyay wakiilka reer Spain ee Alfredo Duro, wakiilka ayaa si aan toos ahayn u dhaleeceeyay saraakiisha Real Madrid oo uu sheegay inay sabab u ahaayeen in Sergio Ramos uu si xor ah ugu wareego kooxaha kale.
Laakiin qoyska Ramo ayaa durbaba cadeeyay inay sugayaan kooxda iyo dalabkooda isla markaana ay baari doonaan hadii ay tahay wax la aqbali karo oo la aqbali karo.
axadle 5962 posts
Barcelona oo ku jirta kaalinta shanaad